Wamkelekile kwi Zhejiang Kavoun Auto Parts Co., Ltd (ekuqaleni wabhekisela Ningbo Hi-Tech Zone Kavoun Transmission Parts Co., Ltd)
inkampani yethu mveliso ngobuchule nelithumela eziqhutywa umatshini nxalenye namabhanti transmission. Emva kweminyaka engaphezu kweshumi yophuhliso, amaphondo ngaphezu kweshumi kunye nezixeko aye asekwa yokubonelela zakwa kunye namagcisa zobungcali kunye namaqela yobungcali neentengiso, kwaye namandla nophuhliso zobugcisa olomeleleyo. Badlula ku ISO9001: 2000 kwezatifiketi inkqubo yolawulo lomgangatho lamisela TS16949 umgangatho esezantsi inkqubo yolawulo.
Iimveliso ezingundoqo yenkampani "KAVOUN" yaye "XIAOHUOBAN" brand HNBR Timingbelt kunye CR Timingbelt, izixhobo ibhanti kabini kabini yolunye, isantya eliguqukayo V ibhanti, imoto V ibhanti, ibhanti auto ixesha, multi nesinqumka ibhanti, qinisa ivili, ibhanti yolunye ivili, ivili ibhanti, impompo, wiper, kwabona V-ibhanti, kunye nezinye iinxalenye transmission. Isetyenziswa ngokubanzi emotweni, isixhobo umatshini, elukiweyo, icuba, petrochemical, ukutya, izixhobo zombane, ukupakishwa, nendlu izixhobo zombane, imigodi, oomatshini zobunjineli namanye amashishini.
Iimveliso yenkampani yethu luphawulwa zobugcisa ophezulu, umgangatho ophezulu, umgangatho elungileyo, ukumelana ukwaluphala, nokumelana, ukumelana eliphezulu lobushushu, emhle imbonakalo, ixesha elide yaye elide njalo njalo. Sifumene indumiso eliphezulu kubathengi kunye wathengisa kulo lonke ihlabathi.
Ukusukela ngomhla wokuzalwa kwalo, inkampani yethu, ukuba ndingahlangani imfundiso ka 'yokukhuthaza uphuhliso kunye inzululwazi nobuchwepheshe, ukuthatha umgangatho njengoko esisiseko kunye nomthengi ukuzikhathalela ", kuphuhlisa umoya" unyamezelo, ezintsha kunye kwiklasi yokuqala ". Ngokusebenzisa ezintsha zobuchwepheshe, izinto ezintsha ulawulo kunye nophando nophuhliso lweemveliso zobugcisa eliphezulu ezintsha, inkampani rhoqo kuphucula isiqulatho netheknoloji imveliso, kwaye ukuba inkampani kunye nenkampani. Abathengi win brilliant ngakumbi ngomso.